प्याज सूप कसरी पकाउने? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कसरी प्याज सूप पकाउने?
मात्र प्याज संग
सानो प्याज टाउको काट्नुहोस् र राम्रोसँग पार गर्नुहोस् तरकारी तेल सॉस प्यानमा मसाला गहुँको पीठो र स्वादको लागि नुनको एक बड़ा चमचा थप्नुहोस्। यदि मरिच राखिएको छैन भने सूप मसलादार हुँदैन। एक मिनेटको लागि आटा फ्राई र उबलते पानी वा तातो कुखुराको स्टॉक खन्याउनुहोस्। लगातार हलचल, केफिरको स्थिरतामा ल्याउनुहोस्।
Sou 54 सूप व्यंजनहरु
वेबसाइटमा हामी घरमै खान्छौं, वाई.भिसट्सकायासँग एक नुस्खा छ। यो स्वादिष्ट बाहिर जान्छ।
डक सूप सम्भवतः फ्रान्सेली भोजनको सबैभन्दा प्रसिद्ध व्यंजन हो। जहाँसम्म, यदि तपाईंले वास्तविक प्याजको सूप प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईं सफल हुन सक्नुहुन्न। मैले भन्नु पर्छ कि त्यहाँ प्याजको सूपको लागि कुनै एकल रेसिपी छैन, जस्तो कि बोर्श वा पिलाफको लागि कुनै पनी विधि छैन। बिभिन्न ठाउँहरूमा प्याजको सूप बेग्लै रूपमा तयार पारिन्छ। बिभिन्न फ्रान्सेली शेफहरू र गृहिनीहरूसँग वास्तविक प्याजको सूप पकाउनुको आफ्नै रहस्यहरू छन्। कहिलेकाँही एक अर्काबाट धेरै फरक हुन्छन्। कहिलेकाँही यो धेरै साधारण रेसिपीहरू हुन्, कहिलेकाँही कमान-जटिल वस्तुहरू जसलाई समय र सीप चाहिन्छ।
तर तिनीहरू मध्ये कुनैको मुटुमा प्यासी प्याजको ठूलो मात्रामा शोरबा हुन्छ।
म सूप ग्रेटाइन पकाउने विधि साझेदारी गर्नेछु। सभोयार्ड संस्करणमा। यो प्याज सुपको सबैभन्दा क्लासिक, किसान संस्करण हो। यो ग्र्याटिनबाट हो कि अन्य सबै प्याजको सूपहरू आएका थिए। यो धेरै सरल छ, तपाइँ यसलाई लगभग सहजै पकाउन सक्नुहुन्छ, १1520२० मिनेटमा। तर यसको सरलताको बावजुद (र यसको कारण यो हुन सक्छ), यो एक धेरै स्वादिष्ट प्याज सूपहरू मध्ये एक हो। मेरो दृष्टिकोणबाट
त्यसो भए प्याज लिन्छ। धेरै प्याज। कुनै सेवा भन्दा कम सेवा होइन, तर दुई हो। यो ठूलो काटिएको छ। मलाई र मलाई को मिश्रण मा Sautéed सब्जी तेल (तपाईं नरम बटर लिन सक्नुहुन्छ) सुनौलो खैरो रंग सम्म। यहाँ सम्पूर्ण रहस्य आगोको सुस्ततामा छ। प्याज केवल सुनौलो क्रोस्टले कभर गर्नु हुँदैन, तर राम्रोसँग स्टुभ गरिएको हुनुपर्दछ, कारमेलमाइज गर्नुपर्दछ। यस्तो चाहनाको लागि धेरै राम्रो जेप्टर वा बर्घोभ भाँडो मोटो तलको साथ हुन्छ। यदि त्यहाँ त्यस्तो थाल रहेको छ भने प्यान्समा प्यानमा फ्राई गर्नु राम्रो हुन्छ। प्याजमा गोल्डिंग गरेपछि, (ध्यान!) मैदा थपियो। एक चम्चाको दरमा, स्लाइड बिना, प्याज। पिठो तेल तेल, र प्याज बर्न हुनेछ यदि तपाईं गर्मी न्यूनतम को लागी कम गर्नुहुन्न। अक्सर, प्राय: हिलाउँदै, हल्का खैरो रंगमा ल्याउनुहोस्। शोरबा भर्नुहोस्। यदि बाक्लो प्याज मोटो तल संग प्यानमा, छोड्नुहोस्। यदि प्यानमा, राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्, सॉस प्यानमा खसाल्नुहोस्।
शोरबा बारेमा। कोही पनि राम्रो छ, यसले केही फरक पार्दैन। सरल अवस्थामा, पानीको स्वाद गर्न नुनिलोले काम गर्दछ। तर यो अझै पनि शोरबा पाउन उत्तम छ: कुखुरा, गाईको मासु, तरकारी आई, उदाहरणका लागि, मात्र लिनुहोस् र क्युब्स विघटन गर्नुहोस्। यो ठीक छ, शोरबा मुख्य घटक होइन, प्याज र चीज अझै पनी यसको विशिष्ट स्वाद लाग्नेछ।
अब रक्सीको बारेमा। तपाईं वाइन बिना गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसलाई थप्न राम्रो हुन्छ, त्यसपछि सूपको स्वाद एक रमणीय प्रकाश एसिडिटीको साथ हुनेछ। तपाईंले फेला पार्नुहुने सबैभन्दा नराम्रो सेतो ड्राई वाइन थप्न आवश्यक छ। रक्सी वास्तविक हुनुपर्दछ, एक सरोगेट होइन, तर यो खराब गुणको हो। राम्रो राम्रो छैन, यो सूपमा महसुस हुँदैन। आदर्श विकल्प भनेको त्यो हो जुन मस्को सुपरमार्केटमा ब्यारेलबाट बेचिन्छ वा, थोरैप्याक प्याकेजहरू, वा पॉल म्यासनबाट थोरै कम आदर्श हुन्छ। श्रोताको राशिको चौथो देखि छैठौं थपिन्छ।
एक फोडामा, सार्न को लागी ल्याउनुहोस्। यो उमाउन शुरू हुने बित्तिकै, आगो बन्द गर्नुहोस्, ढक्कन बन्द गर्नुहोस् र जिद्दी गर्न छोड्नुहोस्।
हामी टोस्टको लागि रोटी लिन्छौं। मोटाईमा आधा मा एक धारि चक्कु संग काट्नुहोस्। रोटीको एक टुक्राको मोटाई पाँच मिलिमिटर हुनुपर्दछ, मोटो हुनुहुन्न। टोस्टर वा ओभनमा पोक गर्नुहोस्। हामी पातलो croutons पाउछौं।
अब यी पातलो croutons प्लेटहरूको तल राख्नुहोस्, चीजको पातलो तहले छर्कनुहोस्। परमेसन होइन, भगवानले निषेध गर्नुहोला। केहि एडेमर हाम्रो सस्तो प्रजातिहरू, जस्तै पोसेखन्स्की, धेरै राम्रोसँग उपयुक्त छन्। क्रौंटन्सको अन्य स्लाइसहरू माथि शीर्षमा छोप्नुहोस् र प्याजको साथ शोरबामा खन्याउनुहोस्।
मूल सावोयार्ड व्यंजन विधिहरूमा, प्लेटहरू धातु हुनुपर्दछ, तिनीहरूलाई आगोमा हाल्नु पर्छ र सूप फेरि उमालिनु पर्छ। तर हाम्रो सर्तहरूमा, तपाईं माइक्रोवेभमा पोर्सिलेन प्लेट राख्न सक्नुहुन्छ। प्रभाव उही समान हुनेछ।
र यो प्रभाव पनीर, पग्लिएर, पातलो croutons आफै संग ग्लस र तिनीहरूलाई रोक्न रोक्छ भन्ने तथ्यमा समावेश गर्दछ।
हो, म लगभग बिर्सनुभयो। सूप न्यानो पार्नु अघि, सेवा गर्दै प्रति एक चम्मच कोग्नाक थप्नुहोस्। वा आर्मग्न्याक। वा अंगूर ब्रान्डी। के हात मा हुनेछ।
सबै तातो खानु पर्छ, चिसो हुन नदिनुहोस्।
हिजोका तीन प्याज, तपाई तीनलाई मिक्स गर्नुहोस् र तीनलाई पकाउनुहोस्।
मासु ब्रोथ (कुखुरा, गाईको मासु, गाईको हड्डी मा प्राथमिकता खैरो) - 1.5 एल; प्याज - 500 ग्राम; मक्खन - g 75 ग्राम; ड्राई सेतो वाइन - २०० मिलीलीटर; पीठो - १-२ चम्मच। ; नुन, जमीन कालो मिर्च - स्वाद गर्न; सेतो रोटी को टुक्रा - p पीसी। ; हार्ड चीज (स्विस, gruyere) - -०-200०g
प्याजको बोक्रा ताछ्नुहोस्, पातलो आधा घण्टीमा काट्नुहोस्।
बाक्लो तलको सासप्यानमा, जसमा सूप उमालिनेछ, बटर तताउनुहोस्, प्याज थप्नुहोस् र कम तातोमा पकाउनुहोस्, लगातार सरहर्ती, लगभग २०-२20 मिनेटको लागि। प्याज को छाला एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो, किनकि राम्रोसँग खैरो प्याजले सूपलाई बाक्लो खैरो र color्ग दिन्छ, साथै एक अजीब स्वाद पनि दिन्छ।
जब प्याज नरम, खैरो खैरो बन्छ, एक चम्चा पीठो जोड्नुहोस्, चलाउनुहोस् र अर्को २- minutes मिनेट को लागि प्याज पार गर्न जारी राख्नुहोस्।
शोरबा र दाखमद्य, नुनको साथ सिजन थप्नुहोस् र लगातार सरफर्सनको साथ फोकामा ल्याउनुहोस्। अर्को heat० मिनेट को लागी तातो र उकालो को कम गर्नुहोस्।
प्यानमा १ चम्मच तताउनुहोस्। l यसमा तरकारी तेल र फ्राई रोटी प्रत्येक पट्टि सुनौलो खैरो नभएसम्म। पनीरलाई मोटो खोरमा राख्नुहोस्। सूपलाई तातो प्रतिरोधी कपमा राख्नुहोस्, सूपको माथि भुटेको रोटी राख्नुहोस्, ग्रेटेड पनीरको साथ उदारताले छर्कनुहोस् र ओभनमा राख्नुहोस्, एक सुन्दर क्रस्ट रूपहरू नभएसम्म २०० सीमा प्रीहेटेड। टिप: हाम्रो स्वादको लागि, प्याजको सूप कुखुरा वा तरकारी भन्दा मासु ब्रोथमा अधिक स्वादिष्ट हुन्छ, किनकि उनीहरू प्याजको मीठोपनमा जोड दिन्छन्, र गोमांस - यस मिठासलाई पूरक बनाउँदछ, अलि अलि अवरोध गरेर। थप रूपमा, तपाईं एक ठूलो स्वादको लागि गार्नी गुलदस्ता (थाइम, बे पात, अजमोद, रोजेरी र अजवाइन को एक गुच्छा) थप्न सक्नुहुन्छ। खैर, फ्रान्सेली प्याज सूप जाडोको लागि एक उत्तम उपाय मानिन्छ।
ujaaaaaasssss ... मैले यस्तो बिक्री कहिल्यै देखेको छैन ... शायद प्याजबाट ....
कुखुराको ब्रोथ - २ लिटर,
प्याज - १ pc।,
माखन वा मार्जरीन,
टोस्ट को लागी
सेतो रोटी वा रोटी
* सूप दुवै मासु र तरकारी ब्रोथमा तयार गर्न सकिन्छ
मासु वा बीउबाट मासु ब्रोथ तयार पार्नुहोस्।
गाजरको बोक्रा ताछ्नुहोस्।
प्याज धुनुहोस्, तर छाला सफा नगर्नुहोस्।
प्यानमा पानी हाल्नुहोस्, मासु राख्नुहोस्।
जब पानी उमाल्दछ, फोम हटाउनुहोस्, तातो कम गर्नुहोस् र प्याजको साथ गाजर राख्नुहोस् (तपाईं ब्रोथमा अजवाइन रूट र अजमोदको जराको एक टुक्रा थप्न सक्नुहुनेछ)।
30-50 मिनेट को लागि शोरबा र उमालेको नुन।
तयार ब्रोथ र तनावबाट तरकारी र मासु (वा पिट्स) हटाउनुहोस्।
फलफूल काटिएको प्याज।
पग्लियो माखन वा बटरको मटरको मिश्रण प्यानमा र प्याज नरम नभएसम्म फ्राई गर्नुहोस्।
प्याजमा ब्रोदको १ कप राख्नुहोस्, कभर र कम गर्मीमा १० मिनेटको लागि उमालेर।
बाँकी स्ट्रेन्ड ब्रोथको साथ स्टिउड प्याज मिक्स गर्नुहोस्, प्यानलाई आगोमा राख्नुहोस् र -7-१० मिनेटको लागि उमाल्नुहोस्। मसलाको स्वादको स्वाद लिनुहोस्, यदि आवश्यक छ भने, र मरिच।
सेवा दिँदा, सूपलाई सूप प्लेटमा खसाल्नुहोस्, सूपमा क्रौंटन्स राख्नुहोस्। काटिएको जडिबुटीको साथ सूप छर्कनुहोस्।
Croutons अलग सेवा गर्न सकिन्छ।
क्रउआउटोनहरू तयार पार्नुहोस्: खोर्सको बट्टामा चीजलाई ग्रेट गर्नुहोस्।
रोटी वा रोटीलाई टुक्राहरूमा काट्नुहोस्, बेकिंग शीटमा राख्नुहोस् र ओभनमा राख्नुहोस् १ 180०-२०० डिग्री सेल्सियसमा तताइएको।
ओभनमा रोटीलाई सुक्नुहोस् १०-१-10 मिनेटको लागि।
ओभनबाट क्रौंटन्सहरू हटाउनुहोस्, चीजसँग छिचोल्नुहोस् र चीज ted मिनेट हुनु भन्दा पहिले5मिनेट ओभनमा राख्नुहोस्।
र केहि पनि "fuuuu।" धेरै स्वादिष्ट र असामान्य।
२ ठूलो प्याज बारीक काट्नुहोस्, नरम नभएसम्म बटरमा स्ट्यू गर्नुहोस्, २ चम्मच थप गर्नुहोस्। l पीठो र मासु ब्रोथको ०. liters लिटर। त्यसपछि 2. cup कप दूध, क्रीमको 2.० कप खन्याउनुहोस् र १० मिनेटसम्म पकाउनुहोस्। यस समयमा, सेतो रोटीका धेरै स्लाइसहरू फ्राई गर्नुहोस्, त्यसलाई प्लेटहरूमा राख्नुहोस् (प्रति सेवाको १-२ स्लाइसहरू), प्याजको सूप खन्याउनुहोस्, ग्रेटेड पनीरले छर्कनुहोस्, 0,5-0,5- minutes मिनेटको लागि खडा रहनुहोस् र सेवा गर्नुहोस्। Bon appetit!
पोस्ट पहिलो पाठ्यक्रमहरू
22 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,369 प्रश्नहरू।